जहाँ मर्दा र सम्भोग गर्दा समेत कर तिर्नुपर्छ
२०७१ फागुन २६ गते सम्पत्ति, आय तथा सवारी साधन लगायतको कर त सरकारलाई तिर्ने गरिएकै हो ।
जन्मदिनमा संविधानसभा अध्यक्षलाई नयाँ गाडी
२९ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न दलका नेता, सभासद् र सञ्चारकर्मीले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलाई उनकै कार्यकक्ष सिंहदबारमा बिहीबार ६३औं जन्मदिनको शुभकामना दिइरहँदा पुरानो प्रतिनिधिसभा भवनअगाडि एक हुल कर्मचारी नयाँ गाडीको पूजा गरिरहेका थिए। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसददेखि दोस्रो संवि
सुनको भाउमा थप गिरावट
२९ फागुन, काठमाडौं । सुनचाँदीको मूल्यमा पुनः एकपटक गिरावट आएको छ ।
एसएलसिको तयारी सुरु
२९ गते यो बर्षको एसएलसि परिक्षा नजिकिदै जा“दा तयारीलाई पनि तिब्र बनाइएको छ ।
पाँच जिल्लाको विवाद मिलाउन विकल्पमा बहस
काठमाडौं ३० फागुन । संघियताको ढाँचामा सिमा सम्वन्धी मुख्य विवाद बन्दै आएको पुर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली र कंचनपुरलाई कसरी मिलाउने भन्नेमा शुक्रबार कांग्रेसले मधेशी मोर्चाका नेताहरुसंग छलफल थालेको छ ।
प्रजितालाई ‘गाह्रो भयो वैश सम्हाल्न’
२०७१ फागुन २९ गते आठ बर्ष अघि अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेकी गायिका प्रजिता गेलालले आफूलाई सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय बनाएकी छिन् । बाल्यकालदेखि नै गायनमा रुची राख्ने सुनसरीकी प्रजिताले अष्ट्रेलियामा रहेर ३ वटा एल्बम बजारमा ल्याइसकेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा वार्ता
रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा वार्ता सुरु भएको छ ।
निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ-तराई द्रुत मार्गमा विकास समितिको चासो
व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको आइतबारको बैठकमा काठमाडौँ तराई÷मधेस (निजगढ) द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको गति बढाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न चासो दिइएको छ ।
झरना बज्राचार्यले मलेसियन युवकसँग विवाह गरिन्
१ चैत, काठमाडौं । नेपाली सिने क्षेत्रकी चर्चित अभिनेत्री एवं पूर्व मिस नेपाल झरना बज्राचार्यले विदेशी युवकसँग विवाह
वैदेशिक रोजगारमा भएका १० लाख नेपालीको एमआरपी अझै बनेन
२ चैत, । हस्तलिखित पासपोर्ट प्रयोग गर्न नपाइने ‘डेडलाइन’ साढे आठ महिना बाँकी रहेर्क अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका झन्डै १० लाख नेपालीले ‘मेसिन रिडेबल पासपोर्ट’ (एमआरपी) बनाएका छैनन् ।
चर्चमा बम विस्फोट हुँदा १४ जनाको मृत्यु
चैत पाकिस्तानको लाहोर नजिक रहेका दुई वटा चर्चमा दुई वटा बम विस्फोट हुँदा कम्तिमा १४ जनाको ज्यान गएको छ । इसाइ धर्मावलम्बिको बाहुल्य रहेको योहानवाद इलाका रहेका दुई वटा चर्चमा आत्मघाती बम आक्रमण हुँदा कम्तिमा ५८ जना घाइते भएका छन् ।
एसएलसिमा कडाई गरिने
आगामी चैत्र ५ गते देखि हुने एसएलसि परिक्षामा कडाई गरिने भएको छ ।
२ जहाज आकाशमै जुधे, दुर्घटनाग्रस्त
२ चैत, क्वालालम्पुर । मलेसियामा २ विमान आकाशमै जुधेर दुर्घटनामा परेका छन् ।
रुसी राष्ट्रपतिले सेनालाई भनेः सतर्क होउ !
२ चैत, मस्को । रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रसियाको जलसैन्यलाई तयारी अवस्थामा तथा सतर्क रहन निर्देशन दिएका छन् ।
फेरि आउने भो ओर्जिनल पवनकली शो
काठमाडौं । गण्डक क्षेत्रको गाउँले लवजलाई संचारमाध्यममा ल्याएर चर्चामा आएकी लुनिभा तुलाधर अर्थात पवनकली फेरि टेलिभिजनमा आउँदैछिन् ।
'ज्ञानेन्द्रभन्दा कांग्रेस-एमाले शक्तिशाली'
३ चैत, काठमाडौं । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा कांग्रेस–एमाले शक्तिशाली भएको बताएका छन् ।
गगन थापा र लामा विश्व युवानेताको सूचीमा
सभासद् गगन थापा र चाइल्डरिच नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. छिरिङ लामा विश्व आर्थिक फोरमको 'विश्व युवा नेता' मा छानिएका छन् । फोरमले हरेक बर्ष चालिस बर्ष भन्दा कम उमेरका युवा उद्मी तथा सामाजिक अभियन्तलाई छान्ने गर्दछ ।
पत्निको तलब थाहा पाउन पतिले लगाए हिडन क्यामरा
४ चैत, एजेन्सी । भारतको गुजरात अदालतमा एक यस्तो मुद्दा आएको छ । जसमा एक व्यक्तिले पत्निको तलब जान्नको लागि स्टिंग अपरेशन नै गराएका छन ।
कसैले तपाइँलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन यसरी थाहा पाउनुस्
जोडीहरु एक अर्कालाई सोध्ने गर्छन् ।
एनसेलले सेयर बाँड्दै
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने भएको छ ।
भाडादर निर्धारणमा सकृयता
ब्यवसायीले घटेको भाडादर स्वत लागु नगरेपछि प्रशासनले आज विहानैवाट अनुगमन गरी भाडा कार्यान्वयन गराएको छ ।
यात्रुको २२ हजार भाडा फिर्ता
रेडियो ताप्लेजुङ चैत ४ गते । सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर यातायात ब्यवसायी स्वयंले लागु नगरेपछि बुधबार विहान देखि अनुगमनमा निस्किएको प्रहरी प्रशासनले यहाँका ३ सय २६ जना यात्रुको २२ हजार ६ सय रुपैंया फिर्ता गराएको छ ।
सबैको ध्यान एसएलसीमा
आनन्द गौतम ताप्लेजुङ, चैत्र ३ ( हाङदेवाकी सुनिता पोखरेलले सोमबार आफ्नी बहिनीलाई परीक्षा केन्द्रनजिकैको घरमा पुर्‍याएर डेरामा राखिन् ।
एसएलसी परीक्षा आजदेखि सुरु, पाँच लाख ७५ हजार विद्यार्थी सहभागी
२०७१ चैत ५ गते प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा बिहीबारदेखि सुरु भएको छ ।
म्यानमारमा सरकार र विद्रोहीबीच भिडन्त जारी
5 चैत, याङ्गोन । मयानमारमा सरकार र विद्रोहीबीच जारी रहेको शान्ति वार्ताकै क्रममा एक विद्रोही समूहले सरकारी सेनामाथि जाइलाग्दा बुधबार बिहानैदेखि भिडन्त भएको समाचार छ ।
ट्युनिसियामा बन्दुकधारीको आक्रमणमा १९ को मृत्यु
काठमाडौं, चैत ५ - ट्युनिसियाको एक संग्रहालयमा भएको आक्रमणमा विदेशी नागरिकसहित १९ जनाको ज्यान गएको छ ।
भाडा दर प्रकरणः दोश्रो दिन पनि भाडा फिर्ता अभियान जारी
रेडियो ताप्लेजुङ चैत ५ गते । सडकमा निस्किएको प्रहरी र प्रशासनको टोलिले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी भाडा यात्रुलाई फिर्ता गराउन थालेपछि ट्याक्सी ब्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
चिरञ्जीवी नेपाल नयाँ गर्भनर
चैत्र ५ । चिरञ्जीवी नेपाललाई सरकारले गर्भनर पदमा नियुक्त गरेको छ । उक्त पदका लागि सिफारिसमा परेका तीन जनामध्येबाट नेपाललाई छानिएको हो ।
यमनका राष्ट्रपतिको निवासमा बम आक्रमण
६ चैत, एजेन्सी । यमनको दक्षिणी सहरमा रहेको त्यहाँका राष्ट्रपतिको निवासमा बिहीबार बम हमला गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई कृत्रिम अक्सिजन
६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला शरीरमा एक्कासि अक्सिजनको मात्रा घटेपछि अस्वस्थ भएका छन्।